Kutheni uhamba noMboneleli weNkonzo? | Martech Zone
Kungumceli mngeni ukuthetha nenkampani enezixhobo ezinamandla ze-IT kwaye ubenze ukuba bathenge kwimodeli ye-ASP. Uninzi lwabantu lukholelwa ukuba umahluko phakathi kwe-ASP kunye nenkampani yesoftware yelifa kukuba umntu ukhupha isoftware ukuze umthengi ayiphathe kunye nokunye ukukhutshwa kwi-Intanethi apho isicelo kulula ukusigcina.
Ukujonga kumzi mveliso ngale ndlela, bobabini bajongeka njengeenkampani zesoftware. Oko ngekhe kuqhubekeke kwinyani- kodwa kunzima ukuyichaza loo nto ingcali enamava ye-IT engathandi ukuyekelela kulawulo kuye nabani na- nokuba ubuchule babo buni.
Iinkampani zesoftware zenza izisombululo zesoftware. Ababoneleli ngeNkonzo yokuSebenza ngamaqabane eshishini aphucula izisombululo zesoftware. Umthengisi wesoftware unokuxhomekeka kwinkxaso ye-bug kunye neempawu ezintsha; apho i-ASP inokuxhomekeka ekuqondeni umzi mveliso, iintsingiselo zayo, ukulawula impumelelo kunye nokukhula kwabaxhasi, kunye nokuqhubeka nokukhupha ukukhutshwa ngelixa kugcinwa ixesha elincinci.
Sukuphosa isicelo esisekwe kwiWebhu kwi-ASP, ezi zimbini zahluke kakhulu. I-Gmail sisicelo esisekwe kwiwebhu. IOfisi kaGoogle sisicelo esisekwe kwiwebhu. Unganiki nayiphi na 'inkonzo' kumthengi ngaphandle kokusebenzisa isoftware. I-ASP ibonelela ngezibonelelo, inkonzo, isoftware kunye nenkxaso.
Ngombulelo, umntu ogama lingu-ASP ngokuchanekileyo-Isicelo inkonzo Umboneleli. Ii-ASPs azifezekanga kuwo onke amashishini okanye kuzo zonke iingxaki zesoftware. Zininzi izicelo zesoftware ezisebenza ngcono ekuhlaleni ngaphandle kokukhutshelwa ngaphandle kwiwebhu. Izicelo ezifuna ivolumu ephezulu yedatha ukuba ihanjiswe phakathi kwabaxumi kunye neseva ngumzekelo omnye-ibhendi yebhendi inokuba yibhotile.
Ababoneleli ngeNkonzo yokuSebenza bakunika abasebenzi abathunyelwe ngaphandle abaziingcali kwishishini labo. Ii-ASPs ziyayiqonda indlela isoftware edityaniswe kakuhle kwindawo yakho yeshishini kwaye inceda ukuqhuba iziphumo zeshishini usebenzisa isoftware.
Umzekelo we-ASP: Umboneleli weNkonzo ye-imeyile
Umzekelo omkhulu we-ASP yi Umboneleli ngeNkonzo ye-imeyile. Inkampani, njenge NgqoThagethi, Unemithombo yoshishino emnandi:
Amaqela okuhambisa asebenza kunye nabanikezeli beenkonzo ze-Intanethi ukuqinisekisa ukuba i-imeyile yakho ayichazwa gwenxa njenge-SPAM kwaye ivuselele ukufakwa kuluhlu lwabamnyama.
Amaqela oLawulo lweMveliso abeka iliso kwimizi-mveliso kunye nokuqinisekisa ukuba isoftware yabo yenza i-imeyile ebonwa ngabo bonke abathengi be-imeyile.
Amaqela oLawulo lweAkhawunti anokukunceda ekwenzeni i-imeyile, ukubhala ikopi, kunye nezinye iinkonzo zobuchule ukuze wandise iimpendulo.
Amaqela okudibanisa asebenza neenkampani kwihlabathi liphela kwizicelo ezahlukeneyo kunye namaqonga. Banikezela ngamava ukuze ukudityaniswa kuphuhliswe ngokuchanekileyo okokuqala.
Uphuhliso lwesicelo oluxhasa imigangatho ephezulu yophuhliso kunye nobuchwepheshe kwitekhnoloji kunye neziseko zophuhliso.
Omnye umzekelo: uku-odola kwi-Intanethi
Kwishishini lokutyela, baninzi abantu abathengisa isoftware yoku-odola kwi-Intanethi. Sineeparadigms ezifanayo nabantu be-IT ukuba baphule ii-ASPs eziqhelekileyo, uninzi lwabo bonke abanamava kunye neqela le-IT elikholelwa ukuba linokuphumeza nayiphi na isoftware emhlabeni. Andithandabuzi ukuba banako- kodwa ubuchule babo buqala kwaye bume apho isoftware iqala kwaye iphele khona.
Ingxaki kubathengisi be-Intanethi yoku-odola kwi-Intanethi kukuba bambalwa kubo abajonga ngaphaya kolu shishino… basombulule umba wokuba bafika njani ukusuka kwindawo A ukuya kwindawo B kwaye bavala ucango. Ukufumana iodolo kwi-Intanethi ukuya kwi- POS yinxalenye elula. Nje ukuba uyenze loo nto, 'ukwishishini'. Amacandelo anzima, landela nangona:
Ukuhlalutya ukusetyenziswa kwesicelo, ukuhambelana, ukusebenziseka kunye nokwandisa ujongano lomsebenzisi ukonyusa ii-upsell kunye nokunciphisa amaqondo okulahla.
Ukubonelela ngokunyuka kweodolo yempazamo ngenxa yokuphela, imiba ye-POS, imicimbi yemenyu, imiba yokunxibelelana, imiba yokuhlawula, njl njl.
Ukubeka iliso kwimizi-mveliso yokubonelela ngetekhnoloji elungileyo kunye neendlela ezilungileyo zokwamkelwa kwabantwana nokuthotyelwa kokhuseleko kubalulekile. Uku-odola ngefowuni ziindaba ezinkulu kolu shishino ngoku. Bangaphi kuni abaodole ipitsa ngeSMS? Ewe, bendicinga njalo.
Umdibaniso kubahlalutyi, Iinkqubo zolawulo lomxholo, Intengiso-nganye-yokuthengisa, ukuthengisa nge-imeyile kunye nezinye izixhobo zokuthengisa kubalulekile kulo naliphi na iqonga le-ecommerce. Ngaba 'isoftware' yakho ikwenzela le nto? Hayi. Kodwa i-ASP yakho kufanele ukuba ibe yiyo.
Ii-ASPs ziyafuneka ukuze ziphuculwe kwaye zityalwe
Ii-ASPs zizingqonge ngeyona talente intle kwintengiso, kwaye bakhile izicelo ezisebenzisa zombini iziseko kunye nenkonzo yokubonelela ngezona ziphumo zibalaseleyo. Ii-ASPs zisebenza ngokukhawuleza kwaye impumelelo yazo ibotshelelwe ngqo kwimpumelelo yeshishini lakho.
Olunye uncedo lokugqibela kwii-ASPs, ewe, yindlela ekuhlawuliswa ngayo isoftware. Ii-ASPs zibonelela ngemodeli yobhaliso apho ababoneleli besoftware banikezela ngemodeli yokufumana ilayisensi. Uthini umahluko? Uthenga isoftware kwaye uyayiqhuba. Ukuba ayisebenzi, ubukhulu becala ixhomekeke kumbutho wakho ukuze isebenze. Umnqweno omhle! Ngee-ASPs uqhuba isoftware emva koko uhlawule ukusetyenziswa kwayo.
Ii-ASPs zinika abaXhasi, hayi esi sicelo
Ukusuka kwimbono yeshishini, oku kubonelela ngeshishini elinokubhengeza ngakumbi kuMboneleli weNkonzo yesicelo kunenkampani yesoftware. Oku kunyanzela i-ASP ukuba ityale imali kuzo zombini uphando kunye nophuhliso kunye neetekhnoloji ezinobungqina obupheleleyo. Intsomi nge-ASPs kukuba banenzuzo ngakumbi. Emva kokusebenza nee-ASPs ezinkulu kakhulu, ndiyakuqinisekisa ukuba inzuzo iyahambelana nomzi mveliso wesoftware.
tags: chad pollittlvsitshaliIxesha le-Facebookimvubdiincwadi yentengiso engenayoisaackukho uyiloIzibalo ze-imeyile eziphathwayosekulungileukuthengisa
Ukungena ekuPrinteni kusaPholile!